Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya (XFS), mudane Xasan Cali Khayre ayaa beesha caalamka ugu baaqay in si deg deg ah ay uga qayb qaataan dadaallada naf-badbaadinta ee loogu gurmanayo deegaannada dalka ee fatahaaddu dhibaatada badan ka geysteen. Mudane Xasan Cali Khayre oo warqad u diray dhamaan dowladaha saaxiibka ah Soomaaliya iyo hey’adaha caalamiga ah, ayaa sheegay in dowladda ay bixisay jawaab deg ...
Mudanayaasha Golaha Shacabka oo meelmariyay Sharciga iibka Qaranka
Mudanayaasha Golaha Shacabka Barlamaanka Jamuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo uu Shir Guddoominaya Guddomiyaha Golaha Shacabka Mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa maanta yeeshay kulankodii 6aad kalfadhigiisa 6aad ee Golaha Shacabka. Mudanayaasha ayaa ugu horeyn dood ka dib meelmariyay Sharciga iibka Qaranka, waxaana ogolaatay 133 xildhibaan, labo Xildhibaan ayaa diiday halka Afar mudane ay ka aamuseen meel marinta sharcigan. Sidoo kale mudanayaasha ...
Munaasabad lagu xusayay 96 guuradii kasoo wareegatay markii la aas-aasay Jamhuuriyadda Turkiga ayaa lagu qabtay Magaalada Muqdisho. Xuska oo gelinkii dambe ee Shalay ka dhacay xarunta Safaaradda Turkiga ee Muqdisho ayaa waxaa ka qeybgalay Guddoonka Labada Aqal ee Baarlamaanka Soomaaliya, Wasiirro, Xildhibaanno Madaxda Gobolka Banaadir, Madaxweynaha Hirshabeelle, Ururrada Bulshada iyo marti sharaf kale. Safiirka Turkiga u fadhiya Soomaaliya, Mehmat Yilmez, ...
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dhambaal hambalyo ah oo ku aaddan maalinta Jamhuuriyadda dalka Turkiga waxa uu u diray dhiggiisa dalkaas Mudane Rajab Dayib Ordogaan. Madaxweynaha ayaa ku bogaadiyey Dowladda iyo Shacabka Turkiga ee aan walaalaha nahay horumarka ay ku tallaabsadeen tan iyo sannadkii 1923-dii markaas oo dhidibbada loo taagay Jamhuuriyadda Turkiya. “Anigoo ku hadlaya magacayga, ...
Madaxweynaha JFS oo ugu baaqay xubnaha DFS in qeyb ahaan mushaharaadkoodi u jaraan gurmadka fatahaadaha
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ugu baaqay madaxda dowladda Federaalka Soomaaliya in dowrkoodi ay ka qaataan sidii loo caawin lahaa dadka Soomaaliyeed oo ay fatahaaduhu ku saameeyeen Hiiraan Gedo iyo daadadka ka dhashey roobabka ka da’ay gobalka Baay. Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku baaqay in xubnaha Dowladda ay mushaharaadkooda qeyb ahaan ay u jaraan,si ay ...
Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya (XFS), mudane Xasan Cali Khayre ayaa maanta xafiiskiisa kula kulmay Danjiraha cusub ee Dowladda Sweden u fadhiya Soomaaliya, Staffan Tillander. Kulanka ayaa looga hadlay xoojinta xariirka soo jireenka ah ee ka dhexeeya labada dowladood iyo labada shacab, iyo sii wadidda taageerada dowladda Sweden ay qaybta uga qaadato dib u kabashada Soomaaliya. Sweden waxa ay kamid tahay ...
Duqa Muqdisho oo kormeer shaqo oo isla-xisaabtan ah ku tagay qaar kamid ah wadooyinka Muqdisho & xarumaha Dowlada Hoose Xamar
Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Mudane Cumar Maxamud Maxamed (Cumar Filish) ayaa Kormeer ujeedkiisu ahaa islaxisaabtan waxaa uu ku tagay dhowr meel oo kamid xarumaha dowlada hoose iyo wadooyinka Muqdisho. Goobaha uu tagay ayaa waxaa kamid ahaa Isgooska Fagax oo kamid isgoosyada ugu mashquulka badan ee magaalada Muqdisho kaasi oo xiligaan biya dhigay roobkii da’ay iyadoo uu hakad ...
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa saxiixay sharciga Maamulka Dakhliga oo qeyb ka ah dhammeystirka hannaanka Maamul-wanaagga iyo hufnaanta Maaliyadeed ee dalka. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa Guddoonka Golaha Shacabka iyo Aqalka Sare, Golaha Xukuumadda, Xildhibaannada, Golaha Dhaqaalaha Qaranka iyo dhammaan khubaradii Soomaaliyeed ee qaybta ka qaatay hawshan qiimaha leh uga mahadceliyay dhammaystirka Sharcigan. “Sharcigani waxa uu ...
Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya (XFS), mudane Xasan Cali Khayre ayaa kulan la qaatay guddiga gurmadka fatahaadaha ee shalay uu u magacaabay isku dubba ridka dadaallada loogu gurmanayo dadka Soomaaliyeed ee dhibaatadu kasoo gaartay fatahaadaha ka dhashay roobaka. Guddiga ayaa Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Khayre war bixin ka siiyay howlihii u qabsoomay tan iyo markii la magacaabay, waxa ayna caddeeyeen ...